> Resource> Flash Drive> Olee otú iji naghachi faịlụ site Kingston USB Drive
Kingston USB Iweghachite! ENYEMAKA!
M nwere Kingston 4GB USB pen mbanye. Ọ na-e-arụ ọrụ flawlessly ruo ọtụtụ afọ. Otú ọ dị, n'oge a, mgbe m fanye ya n'ime kọmputa si USB oghere, ọ jụrụ m ka m usoro ya tupu ịnweta. M nwere dị mkpa faịlụ na-apụghị ida ha. Kedu ihe m kwesịrị ịme? Nwere ike m ga-esi data azụ na-enweghị àgwà ọnwụ?
Enyemaka ọ bụla ga-ekele!
Ọ bụrụ na ị na-izute otu nsogbu na-apụghị ịrụ ọrụ ya, echegbula, isiokwu a ga-egosi gị otú idozi ya na 3 nzọụkwụ.
3 Nzọụkwụ naghachi Data si Kingston USB Drive
Iji na-data mbụ, ị na-agaghị kwesŽrŽ Ọkpụkpọ gị Kingston USB mbanye, n'ihi na formatting ọ bụla ikpe nwere ike imebi gị data ọzọ ma ọ bụ na-erughị. Bilie gị data azụ mbụ, mgbe ahụ usoro ya.
Get a Kingston USB mgbake ngwá ọrụ: Wondershare Data Recovery ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac.
Ma nke Kingston USB software bụ ọkachamara na ala, na-ekwe ka ị na-agbake iche iche iche iche nke data na gị USB mbanye, gụnyere akwụkwọ, foto, videos, music, na ndị ọzọ. Mma ma, ọ dịghị achọ ka ị na-ọkà. Ọbụna na ị na-a kọmputa mbido, ị nwere ike naghachi data si Kingston USB draịva n'ime 3 nzọụkwụ.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi data mgbe ịchọta furu efu data, CHETA ịzọpụta Doppler N'ihi ya, zere overwriting mbụ data.
Step1. Ẹkedori Kingston USB mgbake ngwá ọrụ
Nzọụkwụ na otu onye bụ jikọọ gị Kingston USB mbanye na kọmputa na-eme ka n'aka na ọ nwere ike achọpụtara dị ka a mbanye leta na "My Computer". Mgbe ahụ malite usoro ihe omume, ịgbanwee gaa na "Ọkọlọtọ Mode", ị ga-enweta ndị interface dị ka ndị na. Họrọ "Echefuola File Iweghachite" nọgide na.
Step2. Họrọ gị Kingston USB mbanye ka iṅomi
Họrọ gị Kingston USB mbanye ebe a, na-eme ka miri iṅomi, nke nwere ike inyere ịchọ gị data ọzọ kpamkpam. Pịa "Malite" na-amalite ịgụ isiokwu.
Step3. Preview na-agbake data si Kingston USB mbanye
Mgbe Doppler, niile recoverable faịlụ gị Kingston USB mbanye na-achọta na-egosipụta. Ịnwere ike ihuchalu ha otu otu na ego na-agbake ha niile na otu Pịa.
The naanị ihe ị chọrọ na ntị ka bụ: adịghị ịzọpụta natara faịlụ ka Kingston USB mbanye, dị nnọọ na-mma echiche.
Video nkuzi nke Kingston USB mgbake